शीघ्र वीर्य स्खलन के कारणले हुन्छ ? – Everest Dainik
सम्बन्धित् समाचार महिलाहरूमा कसरी हुन्छ स्वप्नदोष, यसरी छ पुरुषभन्दा फरक, के हो स्वप्नदोष ?
सम्बन्धित् समाचार सेक्स गर्नै पर्ने यस्ता छन् कारण
कन्डम प्रयोग गर्ने :त्यस्तै कन्डमको प्रयोगबाट पनि कतिपयलाई शीघ्र स्खलनको समस्या कम गर्न मद्दत पुगेको छ । यस्तो बेला चिल्लो पदार्थ कम भएको तथा बाक्लो किसिमको कन्डमले बढी फाइदा पुर्‍याउँछ ।
सम्बन्धित् समाचार सेक्स महिलाको प्रभावकारी पेनकिलर
यौनसम्पर्क नै गर्न सकिएन र वीर्य योनिमा पार्नै सकिएन भने एकहद सम्म सन्तान उत्पत्तिमा समस्या सिर्जना हुन्छ, तर वीर्य योनिमा स्खलन गर्न सकिएको स्थितिमा त्यसमा भएका शुक्रकीटले डिम्बलाई निसेंचित गर्न सक्छन् । साप्ताहिकबाट साभार
ट्याग्स: Sexual Problem